Date My Pet » 6 Zvinoenderana Nenguva Tips nokuti Kuroorana akangwara!
Last updated: Nov. 25 2020 | 3 Maminitsi verenga
Pane chokwadi zvikuru okuti, "Rudo ibofu."
Zvinoitawo zvinokonzerwa nei pamusoro 50% vakaroorana vari U.S. varambana.
Kunyange nokusaziva kungapa mufaro munzvimbo zhinji, kuita nomumwe upenyu haasi mumwe wavo. Chii hauzivi kunogona mutambo nezuva, kushushikana, murombo utano, unmet tarisiro, kusafara, uye pakupedzisira ... ukama.
Asi pane mashoko akanaka.
Haufaniri kutamba ukama Roulette eramangwana renyu. Zviri zvinogoneka kunyora inofara nemagumo rudo rwenyu nyaya, kana uchifunga mberi usati wedding.
Nyaya iri dzaizopiwa chinangwa ichi.
Vazhinji ndakacherechedza izvi uye vanorumbidza yakavakirwa zvakanaka Ole 'pfungwa pamusoro, ruzivo uye pfungwa. Vamwe ndivo nemvumo raparadza chokwadi anoratidza, Bridezilla.
Hezvino zvikarakadzo zvishomanene unofanira kuziva zvinhu kuwedzera Rudo rwenyu I.Q.
6 Principles Zvinosvibisa kuti Kuroorana akangwara:
1. Ziva kuti muchato hamungandivambi kugadzira chero wakaputsika.
Ndizvozvo. Ndinovenga kuva "Debbie Downer" pano; asi zviri zvechokwadi. Anger utariri nyaya, umbishi, kubheja, udyire, uye kunotenga muropa haangazozikamwi vakaporeswa chete nokuti ukama iri pakukwana newaakaroorana chinzvimbo. Zvinosuruvarisa, kutora ari mumwe akafanana zvikuru kutenga chinhu "se ari" tenga. Chero mamiriro, ndechako ikozvino. nyatsosarudzai kudzivisa mutengi wacho kuzvidemba.
2. Kunyange zvakapesana zvinokwezva, Zvemhuri core the commonalities vanowanzotevedzera kwenguva yakareba.
Hapana chinofanira kuwanikwa kabhoni kopi pachavo. Zvingava kufinha, uye kupa zvishoma nenzira kukura uye mufaro. vachiri, pane zvimwe zvinhu vaviri unofanira zvakafanana. Izvi zvingasanganisira zvinangwa zvako, kwenyu ukoshi hurongwa, uye mumwechete kana vaviri zvavanofarira kana mabasa aunofarira. Heano mamwe nzvimbo kuti funga: Vana vangani vanoita vaviri uchida? Big muchato kana diki? House kana furati? Get pfungwa pano?
3. Kana uine kuongorora Email kwavo, ipazwe yavo mumagariro nevezvenhau nhoroondo, kana dzokuongorora kwavo pafoni, "Houston pane dambudziko."
Kubudirira chero refu, chakakomba ukama inovakwa pamusoro kuvimba. Uye kana uine kana musingazopandukiri. Kunyange vamwe vabereki nharo kuti kana pasina kuvanza, vanofanira kukwanisa kuva carte Blanche zvakawandisa kune nomumwe wavo nhoroondo. Hatingadaro–munhu wose akafanirwa ane Kumbova voga. zvakare, chivimbo kunotodiwa! Ndiko Ichokwadi, kana mumwe wako ane nhoroondo yokunyengedza. Ndicho chimwe nyaya pane imwe nguva.
4. "Tarirai zvakadzama usati svetuka,"Mutongi Mablean vaiwanzoti nguva dzose revai yake yakakurumbira TV mudare anoratidza. Uye chidzidzo akakodzera kuteererwa.
Usati "kusvetuka mutsvairo" kutora nguva inodiwa kuziva mumwe munhu. Vava mwaka shoma pamwe chete. Ona sei / iye anozviita munguva dzenhamo, munguva dzakanaka uye nezvakaipa, panguva yokurwara uye utano, nokuti Zvakanyanya Kunaka Panguva zvawanikwa.
5. Rambai pokutanga nenzira yakakodzera.
Vhiki imwe neimwe iri Bridezilla, vanoiona kuparidzira akangwara vabereki achiita zvimwe zvisarudzo zvikuru pusa. Regai kuva mumwe wavo. Heuno muenzaniso. A mwenga vachapedza $60,000 kupfeka chipfeko, kunyange zvazvo iye akabata basa apo iye ari kuita $24,000 gore. The vaviri, semagumo, Kutanga wanano dzavo unorema muzvikwereti akatasva vakafuratira. Kana kugara kwavo vomudzimai vashoma makore okutanga. Hazvinakidzi. Maiziva here kuti mumwe vaitungamirira zvinokonzera kurambana ndiko mari? Yeuka kuti pamuchato anongova zuva rimwe, apo vakaroorana zvichiitirwa nokusingaperi. Kunyange zvazvo zviri chibarirwo kuti mwenga ade sokuti "vamoyo" paari zuva rinokosha, haafaniri kupedza se "madzimambo."
6. Factor chitendero kupinda kudanana mukana wokuti vanhu vanga.
Kuva hwaro yomudzimu kunogona kubatsira Kukurira yemadutu zvoupenyu, uye kupa simba uye nenhungamiro munguva dzakaoma.
Tevera izvi kardinari nhanhatu mitemo muchato kwemakore akawanda womuchato mufaro.
3 Tips kusika Best Online Dating Profile
10 Zvikonzero nei Cats anopfuura vakomana
Five Life Zvidzidzo Zvatakadzidza Kubva Cats uye Relationships